virus ရှိမရှိ စစ်မယ် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
virus ရှိမရှိ စစ်မယ်
29-07-2008, 11:07 PM
ပို့စ် 158 ခုအတွက် 641 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
virus ရှိမရှိ စစ်မယ် တကယ်ထိရောက်တဲ့ နည်းလို့ မဆိုလိုပေမယ့် ခန်မှန်းနိုင်အောင်ပါ ..
Start-->Run --> cmd ရိုက်ထည့်ပါ .. Command prompt ပေါ်လာပါမည် .. cd\_ ရိုက်ထည့်ပါ enter နိုပ်ပါ
C:\_>setup လို့ ရိုက်ထည့်မယ် enter နိုပ်မယ် ဒါဆိုရင် please go to the Control Panel to install and configure system components ဆိုပြီး dialog box လေးပေါ်လာရင်
virus မရှိပါဘူး အပေါ်ခဲ့ရင် တော့ virus ရှိနေပါပြီ
Last edited by shadeboy; 29-07-2008 at 11:12 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 75 ဦးတို့မှ shadeboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုအောင်ခိုင်စိုး, ကိုသဝေထိုး, ခင်ကေသာ, ခိုင်မြဲ, ချယ်ရီမင်း, စစ်မာန်, စွမ်းကမ္ဘာ, ဆန်းမောင်, ညီညီဇော်, ညီစေမင်း, နန်းရွှေဝါ, နီထွန်းဦး, ဖန်နေ၀န်း, ဖယောင်း, မိုင်ဆန်း, ရာဇာထွန်း, ရာမ, ရှိန်းတေဇာကျော်, လူမုန်း, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, သက်ပိုင်ဦး, ဟန်မိုးလွင်, ဟိန်းသူအောင်, အပယ်ခံ, အိုက်ထွန်း, အတွေးသစ်, ကောင်ပေါက်စ, ကောင်းကင်ထက်, ကျော်စွာမောင်, ကျော်ထက်ချိန်, ဇော်ရဲပိုင်, ဖော်ထူး, မေဦးမွန်, မောင်ကီး, သေးသေးလေး, အောင်လံလေး, ငြိမ်းချမ်း, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, ဖြိုးခန့်, နှင်းဆီနီ, AZM, blackNwhite, bonge, februarygirl, godoflove, goldstar, gongyishin, hanhtun, heinthurein, hwanmoeaung, k k, khinkhinmoe, ko ko kyaw, ko myo, kophyo85, kyawlinoo, linthuraaung, minthike, myatnoethu, naing lin76, NaNge, nwaye nwaye, nyiminhtet, nyinyi mt, pannuko, Phoekwarlay, phyomyintthein, phyuphyukyaw, shwemyay, Starfire, TheGreats 2@R&!, Thein Than, thura.it, tm4592
Find More Posts by shadeboy
30-07-2008, 02:17 AM
ပြန်စာ - [B]virus ရှိမရှိ စစ်မယ်[/B]
ကျွန်တော် လို ပျင်းတဲ့ သူအတွက်တော့
တော် တော် လေး အသုံးဝင်တယ်ဗျာ
ကျေးဇူး အထူးပါ ကို shadeboy ရေ
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ကိုဖြိုးငြိမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
linthuraaung, naing lin76, Thein Than, theinhtike
30-07-2008, 08:33 AM
အကိုပြောတဲ့ အတိုင်းလုပ်လိုက်တာ please go to the Control Panel to install and configure system components ဆိုပြီး dialog box လေးပေါ်မလာဘူး။ 'setup' is not recognized as an internal or extranal comman, operable program or batch file. အဲ့လို လာ ပြောနေတယ် ။ ဘာလို့ လဲ ။ အဲ့ ဒါ ဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ် ရှိနေပြီလား။ ဘယ်လို ရှင်းရမလဲ။ လုပ်ပါအုန်း။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ညီခဝေ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
hwanmoeaung, linthuraaung, Thein Than
30-07-2008, 08:37 AM
အဲဒီ Box လေးတော့ပေါ်လာတယ် ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါအမြဲ ပေါ်တာလားတော့ မသိဘူး ၊ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော်က Virus ရှိတဲ့ အချိန်မှာ အဲဒါမျိုးတစ်ခါမှ မစမ်းဖူးဘူးဗျ ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ sawjonnie အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
30-07-2008, 08:59 AM
တော်ပါသေးရဲ့ ..တို့မှာ virus မရှိဘူးတဲ့....တော်ပါသေးရဲ့..
30-07-2008, 10:50 AM
ပို့စ် 196 ခုအတွက် 356 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - virus ရှိမရှိ စစ်မယ်
ကောင်းလိုက်တဲ့ Virus စစ်နည်းလေး...
Virus တကယ်တွေ့ မတွေ့တော့ မသိဘူး...
[COLOR="Blue"][SIZE="3"]ရုံးထွက်ဖို့ ခက်တဲ့ ဘဝ သံသရာထဲမှာ ကြိုးစားရုန်းကန်မှုတွေ နဲ့
Visit akaris's homepage!
Find More Posts by akaris
30-07-2008, 12:52 PM
XP မှာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်
vista မှာ မရဘူးဗျ ဘယ်လိုစမ်းရမလဲ . . .
နောက်ကွယ်မှာ သူ့အလုပ် လုပ်ပုံလေးပြောပြပေးနိုင်မလားခင်ဗျာ (Process)
30-07-2008, 02:12 PM
ကျွန်တော်လုပ်တာကျတော့ အစ်ကိုပြောသလို စာတန်းကြီးမပြဘူး၊ Welcome to Virtual Drive Pro Uninstall wizard ဆိုပြီးပဲ ပြတယ်။ အဲဒါ ဘာဖြစ်တာလဲ အစ်ကို။
Find More Posts by ကျော်ခိုင်ဝင်း
31-07-2008, 04:08 AM
'setup' is not recognized as an internal or extranal comman, operable program or batch file ဆိုတာ ကြီးပဲပေါ်နေတယ်။
ဘာ ဆက်လုပ်ရပါ့။
Setup is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file လို့ပေါ်နေပါတယ် ဒါဆိုရင် virus ရှိတယ်ပေါ့နော်
window က vista ပါ။ ဘယ်လိုသတ်ရမလဲဟင်
တင်ထားတဲ့ virus software နဲ့သတ်ရင်ရပါသလား?? Software က Avast ပါ
[B]မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့အရာ မရှိတာမှန်ပေမယ့်
မဖြစ်သင့်တဲ့ အရာတွေ လောကမှာ တောင်လိုပုံနေပြန်ရော[/B]
Find More Posts by မရနွေး
02-08-2008, 01:40 AM
ပို့စ် 20 ခုအတွက် 61 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးပဲဗျို့....မသိလို့မေးအုံးမယ်နော်....risk ware တို့ spy ware တို့ကိုရော
Find More Posts by kyawmin
Originally Posted by မရနွေး
အမပြောတာ ဗီစတာ အားလုံးမှာ ဖြစ်နေတာနဲ့ တူတယ်။ ကျနော့် စက်မှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကျနော် လည်း ဗီစတာ သုံးတာပါ။
ကျနော်ထင်တာတော့ စိတ်ပူစရာမလို ဘူးထင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ညီခဝေ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by ညီခဝေ
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ........ အစ်ကိုပြောသလိုပါပဲ vista မှာဆိုရင်မရ ပါဘူးခင်ဗျာ..
virus ၀င်နေပြီဆိုရင်တော့ ........ c: drive ထဲက os ရှိတဲ့ drive ထဲက
window folder ကို antiviurs နဲ့ပြန်စစ်ကြည့်ပါ.. ရှိတယ်ဆိုရင် virus name ကိုမှတ်ထားပြီး အပြီးပိုင်ရှင်းလင်းဖို့အတွက် regedit .. ထဲက
HKEY_CURRENT_USER-->Software-->Microsoft-->Window-->CurrentVersion-->Policies -->Explorer ကိုဖွင့်ပြီး ညာဘက်က box ထဲမှာ..
ခုနက မှတ်ထားတဲ့ virus name ကိုရှာပြီး delete လုပ်လိုက်ပါ ။
CurrentVersion-->Run ကိုလည်းဖွင့်ပြီး လုပ်ပါ..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ shadeboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, နီထွန်းဦး, သက်ပိုင်ဦး, ဟိန်းသူအောင်, naing lin76, Phoekwarlay
29-08-2008, 09:27 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Sep 2007
ပို့စ် 490 ခုအတွက် 5,499 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကွန်ပြူတာမှာ Virus ရှိ၊ မရှိ ကိုစစ်ဆေးကြည့်
ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ Virus ရှိ၊ မရှိကို အလွယ်တကူ စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Antivirus Software မရှိဘဲ စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများစွားရှိပါသည်။ အရင်ဆုံးစစ်ဆေးကြည့်ရှုရမှာကတော့
*	Tools Menu က Folder Options ပျောက်နေခြင်း
*	Command Prompt, Registry, Task Manager ကိုဝင်တိုင်း ကွန်ပြူတာ Restart ကျနေခြင်း
*	Administrator Account ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ Registry Editor, Task Manager ဖွင့်မရခြင်း
*	Hidden Files, Hidden System Files တွေကို ဖော်မရဖြစ်နေခြင်း
*	Folder တွေကို Double Click နှိပ်လိုက်တိုင်း My Document Folder ပဲပေါ်နေခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် Folder လည်း မပွင့် ဘာမှလည်းမတတ်လာခြင်း
*	Memory Stick ရဲ့ Drive ပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်ရင် Open က ထိပ်ဆုံးရောက်နေ မယ့်အစား Autoplay က ထိပ်ဆုံးရောက်နေခြင်း
*	Drive တွေ၊ Memory Stick တွေကို Double click နှိပ်လိုက်တိုင်း OpenWith Box ပဲပေါ်လာခြင်း
*	Memory Stick ထဲက Folder တွေပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး properties ကိုရွေးရင် Type မှာ File Folder လို့ပေါ်နေမယ့်အစား Application လို့ပေါ်နေခြင်း
*	My Folder ဆိုတဲ့ Folder အောက်မှာ MyFolder.exe ကိုတွေ့မြင်နေရခြင်း (Folder ၏ နာမည်နှင့်တူသော exe ၀င်ရောက်နေခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
*	Task Manager ကိုဖွင့်ပါ။ (Ctrl+Alt+Del). Flashy, Fun, New Folder စတဲ့ Process တွေနဲ့ မသင်္ကာဖွယ်ရာ Process တွေ Run နေခြင်း (Run နေတယ်ဆိုရင် ဘယ် Memory Stick မှမတပ်ပါနှင့်။ Virus ချက်ချင်း ကူးစက်ခံနိုင်ရပါတယ်။ Stick ကို Format ချလည်းအပိုပါပဲ။ ကိုယ်က Format ချပြီးတာနဲ့ Virus ကပြန်ဝင်နိုင်ပါသည်။)
အထက်ပါ အချက်တွေထဲက တစ်ခုခု ဖြစ်နေရင် ကွန်ပြူတာမှာ သေချာသလောက်နီးပါး Virus or Trojan orှpyware တစ်ခုခု စက်ထဲမှာရှိနေပြီလို့ ယူဆနိုင်ပါသည်။ အခြားစစ်ဆေးနည်းတွေ အများကြီးရှိပါသေးသည်။ ပိုသေချာအောင် Antivirus Software တစ်မျိုးမျိုးကို install လုပ်ပြီး Full Scan Run ကြည့်ပါ။ Virus ၀င်တာသေချာပြီးဆိုရင်တော့ Virus ကို အရင်သတ်လိုက်ပါ။ Virus Backup တောင်မလုပ်ထားပါနှင့်။ Backup လုပ်ထားတဲ့ Virus ကအန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ တကယ့်ပြဿနာက Virus တွေကို အပြတ်ရင်းပြီးသည့်တိုင်အောင် Folder Options လို Feature မျိုး ပြန်မပေါ်လာဘူးဆိုရင် Hard Disk ကို Format ချပြီး Windows အသစ်တင်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ Folder Option, Task Manager and Registry တို့ကို Tools တချို့အသုံးပြုပြီး ပြန်လည်ဖော်ထုတ်လုပ်ရပါတယ်။
ပိုးကောင်လေး နောက်တော့မှပဲ Folder Option, Task Manger and Registry ပြန်ပေါ်အောင်ပြုလုပ်ပုံကိုဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမည်။ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ ပိုးကောင်းလေးရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ စာမေးပွဲကြီး ရှိနေလို့ စာလုပ်လိုက်ပါအုံးမယ်။ ပိုးကောင်လေးအားတာနဲ့ အနည်းငယ်ဆီရေးပြီး ပို့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ အခုတော့ပိုကောင်းလေး အဆူခံရခြင်းမှ လွတ်ကင်းအောင်စာလုပ်လိုက်ပါအုံးမယ်ခင်ဗျာ။
may big GOD bless for all!!!
အောက်ပါအသင်းဝင် 26 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စိုးလေး, စွမ်းကမ္ဘာ, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, လူမုန်း, သက်နိုင်, သက်ပိုင်ဦး, ဟိန်းသက်အောင်, အပယ်ခံ, အိုက်ထွန်း, အမောင်, ဦးသာကြီး, ကောင်းကင်ထက်, ကျော်ထက်ချိန်, မေဦးမွန်, သေးသေးလေး, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, blackNwhite, hwanmoeaung, moe_poung, Phoekwarlay, Thein Than, thetwinoo, thura.it, zanyzero9, zinnaing
Find More Posts by poekaunglay87
08-09-2008, 10:58 AM
ပို့စ် 43 ခုအတွက် 66 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - ကွန်ပြူတာမှာ Virus ရှိ၊ မရှိ ကိုစစ်ဆေ
ကျေးဇူးပဲ ပိုးကောင်လေး ရေ
ကျွန်တော် တို့နားလည် အောင်ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
[COLOR="Red"]အရာအားလုံး စွန့် လွတ်လိုက်ရယင်တောင် သတိရခြင်းကို ငါ' ပိုင်တယ်[/COLOR]:22:
Last edited by tu tu; 08-09-2008 at 12:25 PM.. Reason: Quote လုပ်ထားလို့
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ရှင်နေမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Thein Than, zanyzero9, zinnaing
Find More Posts by ရှင်နေမင်း
28-10-2008, 03:30 PM
ပို့စ် 93 ခုအတွက် 173 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by poekaunglay87
ကျေးဇူးကမ္ဘာ ပါပဲအစ်ကိုရေ .... ပန်စီ့စက်ကလေ တခြားဘာမှမဖြစ်ဘူး အကုန်ကောင်းနေတော့ ဗိုင်းရပ်စ် မ၀င်လောက်ဘူးထင်နေတာ ခုလိုပြောမှပဲသိတော့တယ် .. တော်သေးတယ်အချိန်မီသိလို့ .. ကျေူးဇူးပဲ အစ်ကိုရေ ...
[SIZE="3"][COLOR="Indigo"] [FONT="Comic Sans MS"]Death seems horrible ... but ...
Dying inaplace of someone I love seems likeagood way to go ... [/FONT][/COLOR][/SIZE]
Lay Lwint Net Thar
ပို့စ်3ခုအတွက်7ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
I have tested it like Ko Shade Boy said...and the dialog box is appeared...So it is supposed to be virus is not exist in my computer...But in fact, some viruses are exist in my computer..so we can't say it is true to test to know weather there is virus in our PC...I dun agree this kinda test
A moment's pain foralife time of pleasure ! :21:
Lay Lwint Net Thar ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Lay Lwint Net Thar
တည်နေရာ: On the World
ပို့စ် 52 ခုအတွက် 170 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးပဲဗျို့ _ ဗိုင်းရပ်စ် မရှိဘူးလို့တော့ပြတယ် _ ဒါပေမဲ့ ကျနော့် ရဲ့ DNS Address ကို တစ်ယောက်ယောက်က ဟက် လုပ်ထားသလိုဘဲ _ အရင်ရှိနေတဲ့ address ကို ပြန်မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ် _ workgroup အတွင်းမှာ နတ်ဝက် ချိတ်ရတာအဆင်ပြေပေမဲ့ application server နဲ့ချိတ်ရတာလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ် _ ကျေဇူးပြုပြီးကူညီဖြေရှင်းပေးပါအုံးနော်
Find More Posts by ကိုကိုသီဟ
09-11-2008, 08:49 AM
Find More Posts by k2chit
ပို့စ် 30 ခုအတွက် 63 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
သမီးတို့ သုံးတဲ့ကွန်ပျူတာမှာ ဒီလိုပဲပေၞနေပါတယ် 'setup' is not recognized as an internal or extranal comman, operable program or batch file. အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ကူညီကြပါအုံးနော်၊ C Program ထဲက Os ရှာမတွေ့ ဘူးဖြစ်နေတယ်၊ အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်လျှက်
အချစ်ဆိုတာ*အ* လို့ ချစ်တာတဲ့ ကိုယ်ကတော့ ချစ်လွန်းလို့ *အ* ပေးလိုက်တာပါ.......
Find More Posts by myatnoethu
22-11-2008, 08:19 PM
ပို့စ် 28 ခုအတွက် 141 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Find More Posts by kyawkyar
29-11-2008, 10:46 AM
တည်နေရာ: United States
သမီးကွန်ပျူတာမှာ access denied တဲ့ ဘာမှမပေၞလာဘူး virus ရှိနေပြီထင်တယ် ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမှာလဲ ပြောပြပေးပါဦး
Find More Posts by airzac
30-11-2008, 01:28 AM
access denied , ဆိုတာ ဘယ်မှာပေါ်တာလဲ ခင်ဗျ ။ အင်တာနက်ထဲသွားရင် browser မှာ ပေါ်တာဆိုရင်တော့ ဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်ပါဘူး။
21-01-2009, 08:41 PM
Find More Posts by lumonelay
22-01-2009, 10:40 AM
ပို့စ် 12 ခုအတွက် 20 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။ကျနော်တို့လိုငပျင်းတွေအတွက်အသုံးဝင်တယ်။ကျနော့်စက်မှာလဲမရှိဘူးလို့တော့ပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျနော့်အထင်ပြောရရင် spyware တို့ trojans တို့တော့ရမယ်မထင်ဘူးဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော့်စက်မှာ အကောင်ဝင်သောင်းကျန်းနေတာတော့သေချာတယ်။ C:\_ drive ကို double click ပေးပြီးဖွင့်လို့မရဘူးဗျ။ အရင်ကလို autorun.inf လဲမဟုတ်ပြန်ဘူး။ အသစ်ဗျ။ windows cannot find 'resycled\_ntldr.com'. တဲ့ Error Message က အဲလိုပြတယ်။ open နဲ့ဖွင့်ပြန်တော့လဲ Access is denied တဲ့ဗျာ။ သိသူများရှိရင် လုပ်ကြပါဦး
Mon Aung ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Mon Aung
23-01-2009, 10:50 PM
ပို့စ်6ခုအတွက် 19 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အစ်ကိုပြောသလို လုပ်တယ်ဗျ please go to the Control Panel to install and configure system components ဆိုပြီး dialog box လေးပေါ်လာပါတယ်
ဒါပေမယ် avast က File name c:\_WINDOWS\_system32\_ascbalo3N.dll မှာ win32.Adware.gen.Adw ဗိုင်းရပ်စ် လို့အော်နေတယ်
Find More Posts by aung174
24-01-2009, 10:13 AM
ပို့စ် 158 ခုအတွက် 830 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by shadeboy
အစ်ကိုရေ ..ကျွန်တော့်စက်(Window Xp) မှာတော့ အကိုပြောသလိုပေၞပါတယ်။ (ပညာရှိကြီးဘွဲ့နဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်)
အဲ့ဒါဆို Virus မရှိလို့ပေါ့နော် ။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်စက်မှာ ဖျက်မရတဲ့ Autorun.inf folder ရှိနေတယ်။ ဖျက်မရလို့စိတ်ညစ်နေတာ ။ ဒီမှာ တော့မေးဘူးတယ်။ ပြောပြအုန်းနော်၊ ဘယ်လိုဖျက်ရမယ်ဆိုတာ။
~ သက်ရှိသက်မဲ့ ဘယ်အရာကိုမဆို
~ တဏှာနဲ့ချစ်ရင် စိတ်ပူလောင်ရတယ်၊
~ ဒေါသနဲ့မုန်းရင် စိတ်ဆင်းရဲရတယ်၊
26-01-2009, 02:34 PM
Virus ရှိရင်ဘယ်လိုပေၞမလဲ ခင်ဗျ။ Screen Shoot လေးတင်ပြီးပြောပြအုန်းနော်။ မြင်ဘူးချင်လို့။
ကိုAZM ရေ - ကိုShadeboy ရေးထားတာနည်းနည်းလေး စကားလုံးကို နောက်ပြီးတော့ ရေးထားလိုက်လို့ ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေလို့ထင်တယ်။ ကို shadeboy ပြောထားတဲ့အထဲမှာ please go to the Control Panel to install and configure system components ဆိုပြီး dialog box လေးပေါ်လာရင်တော့ Virus မရှိပါဘူး။ မပေါ်ရင်တော့ Virus ရှိပါတယ်လို့ပြောထားတာလေ။ Virus ရှိရင်တော့ ဘာမှပေါ်မှာ ဟုတ်ဘူးလေဗျာ။ ကိုshadebaoy ရေးထား နည်းနည်းစာလုံးမှားနေလို့ပါဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ညီစေမင်း, ကျော်ထက်ချိန်, မောင်ဇော်ဇော်အောင်, AZM, bonge
10-12-2009, 03:29 AM
၀င်းဒိုး7မှာရော အဲ့ဒါသုံးလို့ရလား မသိဘူး ကျနော့်မှာလည်း ' setup ' is not recognized as an external or internal command operable program or batch file လို့ပဲပြောနေတယ်ဗျ .... window7 မှာလည်းမရဘူးထင်တယ်နော် .... မေးကြည့်တာပါ မှားတာပါရင်လည်းခွင့်လွှတ် ........
Autorun Virus Remover_v2.3 PyaitSone Applications 10 08-08-2010 04:54 AM
computer virus အစ koko01 အထွေထွေဗဟုသုတ203-07-2009 10:02 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 09:45 AM